१० फोटोमा हेर्नुहोस् भारतकी सबैभन्दा सुन्दर महिला सांसद, उनको अगाडि हिरोइन पनि फेल -
१० फोटोमा हेर्नुहोस् भारतकी सबैभन्दा सुन्दर महिला सांसद, उनको अगाडि हिरोइन पनि फेल
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्रीहरु सुन्दरताका कारण बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छन् । तर, सुन्दरताका कारण चर्चामा आउने नेता भने निकै कम भेटिन्छन् । यदि कुनै नेता सुन्दरताको कारण चर्चामा आएमा उनको बारेमा उत्सुकता निकै बढ्छ । पछिल्लो समय यस्तै एक महिला नेता सुन्दरताका कारण चर्चामा छिन् । अहि ले ती नेताका फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
यी महिला भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट चुनाव जितेकी सांसद अंगुरलता डेका हुन् । २१ जनवरी १९८६ मा असममा जन्मिएकी यी महिला नेतृको उ चाइ ५ फिट ५ इन्च छ । २०१६ मा भएको चुनावमा उनलाई भारतीय जनता पार्टीले असममा विधानसभा सदस्य पदको लागि टिकट दिएका थियो । त्यसपछि भएको चुनाव जितेर अंगुरलता असम विधानसभामा सांसद भइन् ।
राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले अंगुरलता अभिनेत्री थिइन् । उनको फिल्म आमी असमिया निकै चर्चित भएको थियो । २०१५ मा आकाशदीवसँग विवाह गरेकी अंगुरलताका पति पनि असमी फिल्मका निकै सफल अभिनेता हुन् । फिल्ममा काम गर्ने क्रममा एक अर्कासँग प्रेम भएपछि यी दुईले विवाह गरेको बताइन्छ । हेर्नुहोस् अंगुरलताका फोटोहरु –
किन भएनछ दिलिप र निरूताको बिहे? दिलिप भन्छन, ‘प्रप...
बिहेपछि गुमनाम भएका दोश्रो पुस्ताका पाँच हिरोईन...
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यादमा कान्छी बनी मुस्ताङ पुगिन...
आफ्नो सुन्दरताले संसारलाई दिवाना बनाउने को हुन् यी...
२ मिनेट दियर सबैजना ले पढौ अनि झर्को नमानी शेयर गर...
प्रिया प्रकाशदेखि नेपालकी तरकारीवालीसम्म, इन्टरनेट...
Prevतस्बिरमा हेर्नुहोस् कलाकारको भाइटिका
Nextफोटोमा रुद्राक्षको प्वालमा छुनुहोस र गहिरो सास लिएर ॐ वाचन गरेर पढ्नुहोस, अनि थाहा पाउनुहुन्छ रुद्राक्षको महत्त्व
मनोकामना माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन भनी एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् .आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ मार्गशीर्ष २८ गते शुक्रबार
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमलाई नदिइने भएको छ।
धमाधम पिच हुँदै भैरहवा विमानस्थलको धावनमार्ग
मलेसियामा बिनागल्ती कोर्रा, फर्किंदा विमानमा बेईज्जत (भिडियाेसहित)
अमला एक फाइदा अनेक , हेर्नुहोस् अमलाका फाइदाहरु
© Copyright 2016–2018 JHAPA POST.COM. All rights reserved.